Taiwan: Tantaran’ireo sisa tsy maty tamin’ny rivo-doza Morakot · Global Voices teny Malagasy
Taiwan: Tantaran'ireo sisa tsy maty tamin'ny rivo-doza Morakot
Voadika ny 09 Septambra 2009 3:16 GMT
Milaza ny angano fa lasa kintana isika aorian'ny fahafatesana ka afaka miahy ireo olona tiantsika. Taorian'ny horohorontany tamin'ny 1999, raha mahita mitsilopy isika amin'ny alina dia fantantsika fa samy manana ny tantarany mahavaky fo avy ireny kintany tsirairay ireny. — Requiem for the 921 Earthquake (Fahatsiarovana ny horohorontany 921)
Namely an'i Taiwan ny rivo-doza Morakot tamin'ny 08 aogositra. Niteraka fahasimbana lehibe ny oram-be nentiny: olona an-jatony ny nentin'ny rano nateraky ny rivo-doza tao an-tanànan'i Hsiaolin. Tany afovoany sy atsimon'i Taiwan kosa dia olona an'arivony no voagadra tao an-tanànany satria voahodidin'ny rano ny tanànany. Tany atsinanan'i Taiwan, trano marobe no difotry ny rano noho ny fiakaran'ny renirano ka olona aman'arivony maro no voatery nafindra toerana.
Ireo sisa tsy maty tao an-tanànan'i Hsiaolin no mitantara ny zava-nitranga nandritra ny rivo-doza:
Jing Bao Huang sy lehilahy matanjaka 9 hafa mpifanolobodirindrina aminy no tsy natory ny alin'ny 7 aogositra. Tokony ho tamin'ny 6 ora maraina (ny 08 aogositra) dia tonga tampoka ny tondra-drano ary nanafotra ny tanàna tao anatin'ny minitra vitsy monja. Teny am-balahana ny rano. Jing Bao Huang… nihantsy ny havany hivoaka. tamin'ireo olona 43 nihazakazaka nivoaka ny tanàna dia nisy ankizy 9, 2 narary ary vehivavy 1 bevohoka. Raha nihazakazaka nivoaka ny tanàna ry zareo dia naheno zavatra nipoaka mafy be mihoatra ny varatra i Jing Bao Huang…olona tao aoriany no maty. “Tany nihotsaka” ilay izy!” Nanjavona tanteraka ny tanànan'i Hsiaolin manontolo.
Ny 11 aogositra dia maika hiverina any an-tanàna ireo sisa tsy maty ireo hijery ny havany. Sharplin, mpanao gazety no nanoratra tao amin'ny bilaoginy:
一大早, 旗山國中早已擠滿心急如焚的家屬…小林村的家屬們好幾度在直昇機要降落時衝往操場…我問家屬怎麼了, 他們說, 是因為昨天有人答應, 要讓他們當中有人可以坐直昇機回去看, 再回來跟其他人講, 可是今天一直等一直等, 都沒人鳥他們.
Vao maraina be, dia feno havan'ny olona tao Hsiaolin mitaintaina fatratra tao amin'ny sekoly Chishan…Nihazakazaka teny an-tokontany izy ireo sao mba misy helikoptera (angidimby) tonga…Nanontany aho hoe fa atao inona. Namaly izy ireo fa sao mba afaka miakatra ao anaty angidimby ny sasany ka afaka hijery any an-tanàna ary avy eo hiverina hilaza ny zava-misy. Niandry vasoka teo nandritra ny 1 andro manontolo anefa ry zareo fa tsy nisy nahatsikaritra azy ireo akory.
Ny 15 aogositra no andro faha 7 taorian'ny ranobe. Andro lehibe ho an'ny maty araka ny fombam-pivavahana any Taiwan. Olona sisa tsy maty avy ao an-tanànan'i Hsiaolin sy ny fianakaviana namoy havana no niverina any an-tanàna hamonjy ny fanompoam-pivavahana ho an'ny maty. Niaraka tamin'izy ireny i Avant.
Nijoro teo amin'ny toerana tokony ho nisy ny tanànan'i Hsiaolin, tsy nahita zavatra nataon'olona nitsangana aho na dia iray aza: tsy nisy sisana trano rava, tsy nisy tamingana fiara, ary tsy nisy ny zavatra ilaina andavanandro. Ny zavatra hany mba hitako dia vato, fotaka ary tapa-kazo. Tsy maheno feona fahitalavitra, tsy misy hirahira, tsy misy miresaka, tsy misy na inona na inona. Ao anatin'ny fahanginan'ny fahafatesana tanteraka ny tanànan'i Hsiaolin.
Niampita renirano ny havan'ireo tra-boina hiverenana any an-tanàna. Nitondra taratasy sy hazokely izy ireo hatao fanomezana ho an'ny maty. Eny an-tehezan-tendrombohitra eny izy ireo no maminavina ny toerana nisy ny tranony. Mihiaka sy mitomany manao hoe: “Dada ô, neny ô, ny zanako malalako!” Eny amin'ny lemaka mangina tsy misy afa-tsy fotaka, vato ary tapa-kazo no miantsoantso izy ireo: “Neny, miverena! Maheno ahy ve ianao? Miverena!”
Taorian'iny rivo-doza nandrava iny dia toerana 452 manamorona ny renirano amin'ny faritra 11 no voatondro ho amin'ny “fanairana mena” ary faritra 328 amin'ny tanàna 129 amin'ny faritra 12 no “fanairana mavo”. tsy maintsy afindra toerana haingana ireo mponina mipetraka amin'ny faritra mena. Na izany aza, tsy ny rehetra no te hifindra. Hoy Chyng:
Milaza ny mponina fa olon-dehibe maro no tsy te hifindra… Nanontaniako izy ireo hoe nahoana? Nilaza i F fa “Efa lasa ny fianakaviako, ka inona no antony tokony handehanako?”’
Any atsimon'i Taiwan dia tanàna maro no mbola safotry ny rano. Nandeha nankany i shuchuan ny 12 aogositra ary nitantara,
Rehefa nandeha tany Wenfeng sy Yanfeng tao an-tanànan'i Jiadung aho, izay tanàna manakaiky ranomasina, dia hatreny am-poto-pe ny rano. Feno zavatra mitsingevana, fitaratra, fako isan-karazany eny ambony rano. Feno fotaka daholo ny trano rehetra. Olona maro no efa nandeha. Eny fa na dia ny miaramila aza tsy tafiditra ao an-tanàna.
Any an-tanànan'i Linbian sy Jiadung kosa, fofona maimbo sy fatim-biby ary fotaka no mifangaro amin'ny rivotra iainana. Efa lasa ny ankamaroan'ny olona. Ireo nisafidy ny hijanona kosa manadio ny tranony miaraka amin'ny jiro eny an-tanany. Misotro dite eo anoloan'ny trano. Mponina iray, Hseng-Hseng no niteny hoe: “Tsy misy te hatory na iray aza”.
Voa mafy koa ny tanànan'i Taitung County any andrefan'i Taiwan. Nandeha tany an-toerana i Apophoto ary nitantara ny zavatra hitany ao amin'ny bilaogy.
Nopotehan'ny rano ny lalana sy ny lalam-by. Ao amin'ny faritra atsimon'i Taimali dia tsy misy lalana hifandraisana amin'ny any ivelany. Tsy afaka mifampitohy amin'ny any ivelany koa i Jingfeng, Daren ary Dawu. Amin'ny alalan'ny angidimby no ahazoan'ny mponina miisa 20 000 fanampiana.
Vao niharan'ny rivo-doza vao haingana i Jialang ka trano am-polony no rava tanteraka tamin'izay. Nahazo lesona tamin'iny ny mponina ka efa niomana niala tamin'ny trano fonenany mialoha ny tondra-drano. Vintana no tsy nahafaty olona maro tamin'izay fotoana izay. Na izany aza, olona maro no nandany ny androny tamin'ny tranony, ary ankehitriny dia mijery fotsiny an-dranomaso ny faharavany entin'ny rano sisa azo atao.
Maratra am-po ireo sisa tsy maty, olona maro no miezaka mampionona azy ireo ary manampy azy ireo hanarina ny tranony indray. Nisy rindran-kira atao hoe “Hira ho an'ny trano” natao tany Taipei ny 15 aogositra. Indro ny santionany amin'izany hira izany:
還我土地　重建家園 就是我啊
Angamba indray andro any hanaraka ny dianao aho
Hanaraka ny lalana ary hiverina hody
Hiverina hody ary hahazo ny tontolo
Hahazo ny tontolo ary hanangana indray ny tranoko.
4 herinandro izayAzia Atsinanana
02 Marsa 2021Azia Atsinanana
Taorian'ny fandraràna nataon'ny tanibe, tototry ny fomba fikarakaràna sakafo atao avy amin'ny mananasy ny tambajotra sôsialy ao Taiwan
18 Febroary 2021Azia Atsinanana
Nosakanan'i Shina ny Clubhouse rehefa niady hevitra momba an'i Xinjiang sy Tiananmen ny mpisera aterineto